Resaka « razoky » sa resak’olon-dehibe… (NewsMada) | AEMW
Resaka « razoky » sa resak’olon-dehibe… (NewsMada)
Resaka iray ihany ireo, na mety koa resaka roa samy hafa samy manana ny lanjany, fa mety ny sehatra ilazana azy, ny mpampiasa azy no mampisy ny tsy fitoviana. Raha ny lafiny fandriampahalemana amin’ny raharaham-pirenena eto amintsika resahina, rehefa tsy hiresaka politika, na misy resa-politika ihany aza ao anatin’izany, aleo atao resaka « razoky » ihany. Ny fanamaivanana ny trangam-piarahamonina ataon’ireo olon-dehibe ihany ny mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto amintsika mirongatra tahaka io. Tsy voafehin-dry zareo olon-dehibe eo amin’ny fitondrana, na ny tompon’andraikitra mivantana, mihitsy izany? Sa hoe sanatria miray tsikombakomba mivantana na ankolaka izy ireo mba hahazoany tombontsoa ?
Singa iray itarafana ny fampandrosoana eo amin’ny firenena ny fandriampahalemana. Rehefa tsy milamina, tsy mandroso… Na izany aza, tsy hifampiandry kendry tohina na hifanome tsiny eto ny rehetra fa aleo ny asa no hamafisina ho an’izay tandrify izany.
Ny mpitandro filaminana no tiana horesahina eto. Tsy hiandry baiko, sy vola midina na mirotsaka vao hanao hetsika hiadiana amin’ny asan-jiolahy. Manarama azy ireo ny vahoaka, ka tokony hiasa ho an’ny vahoaka izy ireo. Araka izany, ataovy resaka “razoky” ny fanehoam-pahaizana amin’izany e! Asehoy ny fahaizanareo…
Fa tsy afa-miala amin’izany rehetra izany koa ny mpitsara. Ireto farany izay mampimenomenona ny olona, hatramin’ny mpitandro filaminana aza amin’ny fisian’ny kolikoly sns, ka maha votsotra vetivety ireo voalaza fa jiolahy voasambotra. Maro rahateo koa ny raharaham-pitsarana, sy ny fanadihadiana misy tohiny ataon’ny mpitandro filaminana mila valiny andrasan’ny olona. Ohatra amin’ireny ny resaka kidnapping, izay meverimberina lava. Ny eo tsy milamina, ny hafa mirongatra. Ity raharaha farany ity, ankoatra ny asan-dahalo, anisan’ny raharaha manahirana satria matetika resak’olon-dehibe ka sarontsaromana, mangingina ho azy eny ny raharaha, na misy aza ny aina nafoy, volabe anjatony tapitrisa very. Aiza ho aiza izao ny tohin’ny kidnapping tany Toamasina, ilay Karana maty voatifitra teny Mangasoavina; ny farany, ilay Karana solotenan’ny orinasa Samsung …? Ataovy resaka “razoky” amin’izay e!
← Hanao amboletra eny amin’ny 13 mey ny AFP : handray ny fepetra sy hisambotra avy hatrany ny Emmo/Reg (NewsMada)
Fitantanana ny FJKM : hifaninana ho filoha ny pasitera Irako sy i Fidimalala ary i Zarazaka (NewsMada) →